Yakavanzika Gwara Discover ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
1.1 Kutumira uye kurekodha general data
2 Kurongeka uye chokwadi cheiyo data
3 Kurovedzera kwekodzero dzekuwana, kugadzirisazve, kudzima kana kupikisa
4 Kugamuchirwa uye kubvumidzwa
5 Shanduko kune iyi mutemo yekuchengetedza
6 Tsamba yekutengesa
Kutumira dhata rako pachako pane ino webhusaiti kunosungirwa kuti ubate, utaure, unyore kune iyo find.online blog, kontrakiti masevhisi anoratidzwa pane ino webhusaiti uye utenge mabhuku mumadhijitari fomati.
Discover.online ichaunganidza iyo Yega Dhata yeVashandisi, kuburikidza nemafomu epamhepo, kuburikidza neInternet. Iyo Yega Dhata yakaunganidzwa, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe, inogona kunge iri, pakati pevamwe: zita, zita rezita, email uye yekubatanidza kubatana. Zvimwechetezvo, mune zvechibvumirano chemabasa, kutenga mabhuku uye kushambadzira, ini ndinobvunza Mushandisi kune mamwe mabhengi kana data rekubhadhara.
Rwako ruzivo ruzivo rwekutora masisitimu anoshandiswa ne Discover.online :
Vashandisi vanogona bvisa chero nguva yemasevhisi anopiwa nekutsvaga.online iyo iyo Tsamba.
Discover.online zvakare inodzidza zvinofarirwa nevashandisi vayo, hunhu hwavo, huwandu hwemigwagwa, uye rumwe ruzivo pamwe chete kuti vanzwisise zviri nani vateereri vedu uye zvavanoda. Kuteedzera zvatinofarira zvevashandisi kunotibatsirawo kukuratidza kushambadza kwakanyanya.
Mushandisi uye, kazhinji, chero munhu wechisikigo kana wepamutemo, anogona kugadzira hyperlink kana technical link kifaa (semuenzaniso, zvinongedzo kana mabhatani) kubva pawebhusaiti yavo kuti vawane.online (iyo "Hyperlink"). Kugadzwa kweiyo Hyperlink hazvireve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati pe Discover.online uye muridzi weiyo saiti kana yewebhu peji iyo iyo Hyperlink yakagadzwa, kana kugamuchirwa kana kubvumidzwa neDisco.online yezviri mukati kana services. Chero zvazvingaitika, Discover.online inochengetera kodzero yekurambidza kana kudzima chero hyperlink kune iyo Webhusaiti chero nguva.
Mushandisi anovimbisa kuti iyo yega data yakapihwa kuburikidza nemhando dzakasiyana ndeyechokwadi, ichisungirwa kutaura chero shanduko kwavari. Saizvozvo, Mushandisi anovimbisa kuti ruzivo rwese rwunopihwa runoenderana nemamiriro avo chaiwo, kuti zviri zvechizvino-zvino uye ndezvechokwadi. Pamusoro pezvo, Mushandisi anozvipira kuita kuti dhata ravo rivandudzwe nguva dzese, achingova nemhosva yekusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara kunogona kukonzerwa neizvi kuInternet Servicios Telemáticos SL semuridzi wewebsite.
Iwe unogona kutungamira yako kutaurirana uye kushandisa kodzero dze kupinda, kugadzirisazve, kudzima uye kupikisa Kuburikidza neposvo tsamba paC / Blas de Otero no16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) kana neemail: info (at) discover.online pamwechete nehumboo hunoshanda mumutemo, senge kopi yeiyo DNI kana yakaenzana, zvichiratidza mumusoro unoti "DATA ROKUDZIVIRIRA".